ဝထ္တု – Shwemyanmar
ဖေဖေ ဆေးသွားကု ပြီ။
ဖေဖေ ဆေးသွားကု ပြီ။ (သမီး မိန်းကလေးတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ ဝတ္ထုလေးပါ) ဖေဖေ ဆေးသွားကု ပြီ။ “”””””””””””””””””” ￼ (စာရေးသူ အဖေလဲ အိန္နိယ မှာ ဆေးသွားကုနေတာပါ ဒီဝထ္တုလေးက ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် ရေးသားထားချင်းဖြစ်ပါသည်။) “” အူငဲ အူငဲ အူငဲ ….”” ၃ယောက်မြောက် သမီးလေး ငိုသံကြောင့် အေးမာ နဲ့ တင်မောင် အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့သည်။ ~”” ကိုတင်မောင် ရှင် ကလေး ခဏ ထိန်းထားပေးပါလား ကျွန်မ ဒီနေ့ အရမ်းပင်ပန်းနေလို့ ခဏလောက် မှိန်းချင်သေးတယ်””~ ကိုတင်မောင် လဲ ဒီနေ့ မိုးမိထားလို့ biogesic တလုံး နဲ့ အဖျားကို […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on ဖေဖေ ဆေးသွားကု ပြီ။
ရန်ကုန် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ကြိုးတိုက်ခန်းက ကြိုးသမားတစ်ယောက်၏…နောက်ဆုံး နာရီ… (ဖြစ်ရပ်မှန်
ရန်ကုန် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ကြိုးတိုက်ခန်းက ကြိုးသမားတစ်ယောက်၏…နောက်ဆုံး နာရီ… ဖြစ်ရပ်မှန်) ကြိုးသမားတစ်ယောက်၏…နောက်ဆုံး နာရီ … (ဖြစ်ရပ်မှန်) ၁၉၄၈ ခုနှစ် ၊ မေလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် အရုဏ်တက် ဝေလီ ဝေလင်းအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန် အကျဉ်း ထောင်ရှိ ကြိုးတိုက်ခန်းသံတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ အသံ က ထောင်တစ်ခုလုံးကိုဆူညံ တုန်လှုပ်သွားသည် ဟု ထင်မှတ်လိုက်ရသည်။ ကြိုးတိုက်အတွင်းမှ လူသား သည် မကြာမီ မိနစ်ပိုင်းမျှသော အချိန်လေးအတွင်းဝယ် ဤလောကကြီးမှ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွါရတော့မည် ကို သိထားပြီးဖြစ်ပေရာ သူသည် အဘယ်မျှ တုန်လှုပ်နေ မည်နည်း။ ရုန်းကန် ထွက်ပြေးခြင်းငှာ မည်သို့မျှ မတတ် နိုင်ပါသော ထိုလူသားသည် မိမိအား လာရောက် ခေါ်ယူသောထောင်အရာရှိနှစ်ဦး၏ရှေ့မှောက်တွင် […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on ရန်ကုန် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ကြိုးတိုက်ခန်းက ကြိုးသမားတစ်ယောက်၏…နောက်ဆုံး နာရီ… (ဖြစ်ရပ်မှန်
စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရာမှ ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးပုပ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နာဖွယ်အဖြစ်အပျက်
စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရာမှ ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးပုပ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နာဖွယ်အဖြစ်အပျက် ဆူး နှင့် ဖက် (ဂျူး) လူနာကို နှာခေါင်းပိုက် တည့်သည့်အချိန်မှ စ၍ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အံ့သြတုန်လှုပ်ကြရပါသည်။ နှာခေါင်းမှ တဆင့် အစာအိမ်ထဲရှိ အစာနှင့် အညစ်အကြေးများကို ပိုက်ဖြင့် စုပ်ယူသည့်အခါ ရလာသည့် အရာများကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့လန့်သွားသည်ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ဘုရားရေ.. အဲဒါဘာတွေလဲ နှာခေါင်းပိုက်ထဲက ရလာသည့် အရည်စေးပျစ်ပျစ်များသည် ညိုညစ်ညစ် အရောင်ရှိကာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နံစော် လှသည်။ ထိုအနံ့သည် ပုပ်ဟောင်သည့် အနံ့နှင့် မစင်နံ့စော်လှသည်။ ထိုအနံ့သည် ပုပ်ဟောင်သည့်အနံ့နှင့် မစင်နံ့ရောထား သည့် အနံ့ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ၊ လူနာ၏ အစာအိမ်မှာ သည်မစင်နံ့ရှိသည့် အညစ်အကြေး ရည်တွေဟာ […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရာမှ ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးပုပ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နာဖွယ်အဖြစ်အပျက်
“ညွန့်ညွန့်စိန်တို့ စစ်မှုထမ်းပြီ” သက္ကရာဇ် – ၂၀၂၅ ခုနှစ် တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လုနီးနီးအချိန်😜😜😜😜😜 အဲ…အဲ့ဒီအချိန်အထိ ညွန့်ညွန့်စိန်က ယောက်ျားမယူဘဲ တောင့်ခံထားတုန်းပါ… ဟိတ် ဒီနေရာမှာ သေချာရေးထားတယ်နော် တခါတည်း ရှင်းအောင်ဖတ်ပါ၊ ညွန့်ညွန့်စိန်က ယောက်ျားမရတာ မဟုတ်ဘူး၊ တမင်မယူတာ အဲ့တော့ အဲ့ဒီအချိန်အထိ သင်းက အပျိုကြီးပဲ… ဒီတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ညွန့်ညွန့်စိန်တစ်ယောက် စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအရ စစ်ထဲဝင်ရပါလေရော… “တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ တပ်မတော်မှ တကိုယ်တည်း အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးများအား အလိုရှိသည်” ဝါးးးစာတန်းကြီးကို ချိတ်ထားတာများ ဝင့်လို့… “သမီးအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ အမေရယ်၊ ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့၊ တကယ်တော့ တပ်မတော်ဆိုတာ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကျောင်းကြီးတစ်ခုပါ၊ တပ်ထဲမှာလည်း အနည်းဆုံး ဖေ့စဖုတ်ကတော့ ဆက်ပြီး ပွတ်ခွင့်ရနေဦးမှာပါ၊ သမီးသွားပြီ အမေ၊ […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on ညွန့်​န့်ညွန့်စိန်တို့ စစ်မှုထမ်းပြီ”
ဒီလို ယောကျာ်း မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင်
►အနာဂတ် အစီအစဉ်တခုခု သင့်အတွက် ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ် . ►သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သင့်ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးတတ်တယ် . ►အပိုငွေကုန်ပေါက်တွေ အပျော်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေ လျော့ပြီး သင့်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အသုံးချတတ်ပါတယ် . ►သုံးနေကျ Password ဖွင့်ပြောပြတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ် လျှိဝှက်ချက် ဆိုတာ သူနဲ့သင့်ကြားမထားတတ်တော့ပါဘူး . ►ဘာပဲလုပ်လုပ် သင့်ဆီက ခွင့်တောင်းတတ်ပါတယ် တချို့ကိစ္စတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တောင်းတတ်တယ် . ►သင်နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက် (ဒါမှမဟုတ်) သင်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတခုခု လမ်းကြုံတွေ့တဲ့အခါ ဝယ်လာပေးတတ်တယ် . ►သင် အပြုအမူတိုင်းဟာ သူ့အတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ် . ►စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ် ။ သင်မှားနေရင်တောင် တခါတလေ သူ့ဘက်က မာနကို […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on ဒီလို ယောကျာ်း မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင်
အ​ရှေ့တံခါး မှ စစ်​သား မျက်​ရည်​များ
ဂုံး..ဂွမ်း..ဂလွမ်​…အ​ဖေ​ရေ ညီ​လေးက ကိုက်တယ်​​ဟူ​သော အသံ​ကြောင့်​ တပ်ကြပ်ကြီး​​တင်​မြင့်​တစ်​​ယောက်​ ယူနီ​ဖောင်းဝတ်​ရင်းတန်းလန်းနှင့်​ အိမ်​​နောက်​​ဖေးသို့အ​ပြေးအလွှားထွက်​လာမိသည်​…ဟာ..မင်းတို့က ဘာဖြစ်​ကြပြန်​တာတုန်း…ထမင်း​ကြော်​ ​ကြော်​​ပေးထားတာ ​အေး​အေးချမ်းချမ်းမစားကြဘူး..ပါးစပ်​ကလည်း​ပြော ပြန့်​ကျဲ​နေ​​သော ထမင်း​စေ့များကိုလည်း သိမ်းဆည်းရင်း.သားနှစ်​​ယောက်​ကို ​မေးလိုက်​သည်​ကိုကိုတိုးက သားကိုပဲပြုတ်​နည်းနည်းပဲ​ပေးတယ်​ ​အ​ဖေ…ဘာ​ ​ခွေး​လေး.. ငါ မင်း​ရှေ့တင်​ ​သေ​သေခြာခြာ ​ဝေပုံချ​ပေးထားတာ​လေ…သူက အရင်​ကုန်​​အောင်​စားပစ်​ပြီး..ငါ့ဆီကလာလု​သေး ငါ့လည်းကိုက်​​သေး..မဟုတ်​ဘူး အ​ဖေ..သူက..ဖျန်း ဖျန်း.တိတ်​ကြစမ်း..အခုရပ်​စမ်း..မင်းတို့နှစ်​​ယောက်​ကို မိုးမလင်းခင်​ ​သောက်​ရန်​မဖြစ်​ကြပါနဲ့လို့ ဘယ်​နှခါ​ပြောရမလဲ…အ​ဖေလုပ်​သူကဖြင့်​ ဒင်းတို့ကို ရုံးတဖက်​နဲ့ ပြုစု​နေရတာ ​အေး​အေးမြိုကြ နှစ်​​ကောင်​လုံး…အသံထပ်​မကြားချင်​ဘူး..​ဟောသည်​မှာ မြင်​တယ်​​နော်​…ဆိုပြီး ကြိမ်​လုံး​ထောင်​ပြလိုက်​ရာ..​..လူတစ်​ပိုင်း​မျောက်​တစ်​ပိုင်း သားနှစ်​​ကောင်​မှာ အိမ်​​ရှေ့သို့ အလုအယက်​ထွက်​​ပြေးကြ​တော့သည်​. ဒါက ၈နှစ်​အရွယ်​နှင့်​ ၅နှစ်​အရွယ်​အသီးသီးရှိ​သော သား​တော်​​မောင်​နှစ်​​ယောက်​နှင့်​ တပ်​ကြပ်​ကြီးတင်​မြင့်​တို့ အိမ်​က​လေးဆီမှ အမြဲလိုလိုကြား​နေရ​သော ​တေးသံသာများဖြစ်​သည်​….သူ့အမျိုးသမီးက သားအငယ်​တစ်​နှစ်​သားခန့်​တွင်​ အမျိုးသမီး​ရောဂါနှင့်​ဆုံးသည်​ ​ဆွေမျိုးမရှိ​သော ဆရာတင်​မြင့်​ခမျာ တပ်​ထဲကရဲ​မေများ ရဲ​ဘော်​များအကူအညီကိုယူရင်း သားလူမမယ်​နှစ်​​ယောက်​နှင့်​ ခရီးဆက်​ခဲ့ရသည်​….ရုံးတဖက်​ ..သားတစ်​ဖက်​..နှင့်​ […]
Posted inဝထ္တု, သတင်း, သုတရသLeaveaComment on အ​ရှေ့တံခါး မှ စစ်​သား မျက်​ရည်​များ
အသက်​၀င်​တဲ့ခြ​င်္သေ့ရုပ်​ တစ်​​နေ့မှာလည်း ဘိုး​တော်​ဘုရားကြီးဟာ မင်းကွန်း​တောင်​ရိုးမှာ တည်​လက်​စ ​ကောင်းမူ​တော်​ မင်းကွန်း​စေတီပုထိုးကြီးရှိရာ ​ရွှေစကြာဖြန့်​ကြတ်​ခဲ့ပါတယ်​ ​စေတီ​တော်​ကြီး​ရှေ့က အရပ်​အမြင်​​တောင်​​ခြောက်​ဆယ်​​လောက်​ရှိ​သော ခြ​င်္သေ့​တွေကလည်းအ​ချောသပ်​ ပြီးစီး​နေပါပြီ ဘို​တော်​ဘုရင်​လည်းဧရာဝတီမြစ်​ကမ်းစပ်​ ​စောင်းတန်းထိပ်​က ဘုရား​စောင့်​ ခြ​င်္သေ့ရုပ်​ကြီး​တွေကိုကြည့်​ပြီး အလွန်​အထူး ပိတီဖြစ်​ခဲ့ရပါတယ်​ ဒီ​နောက်​ နန်း​တော်​ကျွန်းမှာ သွန်းလုပ်​ခဲ့ရာက မင်းကွန်းဘက်​​ကိူ ​ဖောင်​​တော်​နဲ့ တင်​​ဆောင်​လာခဲ့တဲ့ ​ကြေးပိသာချိန်​ ၅၅၅၅၅ ရှိတဲ့ ​ခေါင်း​လောင်း​တော်​ကြီးကို ​ရေဆိပ်​က သွားကြည့်​ပါတယ်​ ဒီခဏမှာ ဦး​ပေါ်ဦး ​ခြေ​င်္သေ့ကြီးနှစ်​​ကောင်​ဆီ ပြန်​လှည့်​သွားတာကို ဘိုး​တော်​ဘုရားကလှမ်း​တွေ့လိုက်​တယ်​ ဒါနဲ့အပါး​တော်​မြဲ ၀န်းကြီး​တွေကို ´´​မောင်​မင်းများ အတွင်းဝန်​ ​ပေါ်ဦးတ​ယောက်​ ငါ့ခြ​င်္သေ့နှစ်​​ကောင်​ကိုဘယ်​လိုများကဲ့ရဲ့အုံးမလည်း မသိဘူး တိတ်​တဆိတ်​ လိုက်​​ချောင်း နား​ထောင်းဦးမှပဲ“` ဘို​တော်​ဘုရားလည်း ကိုယ်​ရံ​တော်​များနှင့်​အတူ ခြ​င်္သေ့ကြီးနှစ်​​ကောင်​​နောက်​ရပ်​၍ နား​ထောင်​​တော်​မူသတဲ့​လေ ဦး​ပေါ်ဦးလည်​​ခြေ​င်္သေ့ကြီးနှစ်​​ကောင်းအား​သေခြာကြည့်​၍ “`အင်း လုပ်​ထားတဲ​ခြ​င်္သေ့ကြီး​တွေကလည်း´´´ စကား​တောင်​မဆုံး​သေဘူး ဘို​တော်​ဘုရားက ဗြုန်းဆိုထွက်​လာပြီး […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on အသက်​၀င်​တဲ့​ခြ​င်္သေ့ရုပ်​
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ လူဝင်စား ဖြစ်ရပ်မှန်
သေခါနီးရောက်နေသည့် သတ္တ၀ါသည် မိမိပြုထားသော ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ထိုကံကိုပြုစဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အာရုံကိုဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ရမည့် နောင်ဘ၀က အခြေအနေကိုဖြစ်စေ ထင်မြင်စွဲလမ်းလျက်ရှိနေ၏။ ထိုအာရုံကို အလိုမရှိသော်လည်း ထိုအခါမျိုးမှာ ပယ်ဖျောက်၍မရ၊ ထို့ကြောင့် သေခါနီး၌ မိန်းမောတွေဝေနေသော သူတို့တွင် တစ်ချို့မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တစ်ချို့မှာ ၀မ်းသာစရာ ပျော်ရွှင်စရာများ တွေ့နေသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ တစ်ချို့မှာ ကြောက်လန့် စရာ ဘေးရန် များနှင့် တွေ့နေ သကဲ့သို့လည်းကောင်း ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေသည်ကို အနီးအပါးရှိလူများက အထင်ရှားတွေ့ရလေသည်။ သေခါနီးရောက်နေသည့် သတ္တ၀ါသည် မိမိပြုထားသော ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ထိုကံကိုပြုစဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အာရုံကိုဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ရမည့် နောင်ဘ၀က အခြေအနေကိုဖြစ်စေ ထင်မြင်စွဲလမ်းလျက်ရှိနေ၏။ ထိုအာရုံကို […]
Posted inဝထ္တု, သုတရသLeaveaComment on ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ လူဝင်စား ဖြစ်ရပ်မှန်
ရေဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာကပါ။ မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင် ကို လက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီး စလိုက်မိတာ..။
ရဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာပါ။ ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်ဦးလေးနဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ခြောက်ယောက် ..စုစုပေါင်းရှစ်ယောက် အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး သီချင်းတွေတီးမှူတ်နေရာကနေ အလာပ သလာပပြောရင်း နာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေ အကြောင်းကိုရောက်သွားပါတယ် ။ ယုံတဲ့သူကယုံသလို မယုံတဲ့သူက မယုံကြလေ တော့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်လာကြပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာ သရဲအလွန်ကြောက်တတ်တဲ့ သူရှိနေပါတယ် ။ သူကတော့ ဘေ့စ်ဂစ်တာတီးတဲ့ ကိုမြင့်ရွှေပါပဲ ။သရဲကြောက်တတ်ပေမယ့် မကြောက်ချင် ယောင်ဆောင်ပြီး စတင်စိန်ခေါ်သူကလဲ သူပါပဲ ။ ” လေးလေး..ကျွန်တော်တော့မယုံဘူး..” ” မင်းကစိန်ခေါ်တာလား မြင့်ရွှေ ” ” စိန်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဖူး..မျက်လုံးနဲ့တပ်အပ်မြင်မှပဲယုံမယ်ဗျာ ” ” ကောင်းပြီလေ..သားငယ်..သောက်စရာ စားစရာတွေ အကုန်ယူပြီး ကားပေါ်တင်လိုက်.. မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင် ကို လက်တွေ့ပြမယ် ” ကိုမြင့်ရွှေလဲကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင် […]
Posted inဝထ္တုLeaveaComment on ရေဝေးသုဿာန်ပြီးစီးခါစ တစ်နှစ်ကျော်အကြာကပါ။ မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင် ကို လက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီး စလိုက်မိတာ..။
ရည်းစားက နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲလို့ အိမ်သာ ဆေးရေ သောက်ပြီး သက်သေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေး
Breaking New… မြန်မာ့တပ်မတော်မှလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်း
သံသယဖြစ်စေသော အချက် (၉) ချက်နဲ့ ကံကောင်းလာတော့မယ့် သူတို့နှစ်ဦး
အရမ်းဝတ်ချင်နေတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ဝတ်စုံကြီး တရားဝင် ဝတ်ခွင့်ရတော့မယ့် ကွီးဖြိုး